Wararka - Isbarbardhiga habab kala duwan oo cadaadis ah
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loo helo saliidda cuntada. Tusaale ahaan habka saxaafadda fur fur, habka saxaafadda hidda, habka soo saarista dareeraha iwm. Habka saxaafadda fur fur jirka ku jira la hal mar saxaafadda iyo double press, saxaafadda kulul iyo saxaafadda qabow. Ma ogtahay waxa ay ku kala duwan yihiin hababka saxaafadda fur fur?
. Kala duwanaanta hal mar riix iyo laba jibaar press
Saliida haraaga ah ee keegga: labadaba hal mar oo saxaafadeed iyo labo laab waa qiyaastii 6-8%, waxay kuxirantahay noocyada kala duwan ee saliida.
2.Qalabka loo isticmaalay saxafada koowaad way kayartahay tan saxaafada labaad, taas oo kaydisa kharashka; saliida ceyriin ee kujirta saxaafada labaad way fududahay in la sifeeyo waxayna leedahay saliid haray.
Ⅱ. Farqiga saxaafadda kulul iyo saxaafadda qabow:
1.Codsashada qabow waa inaad saliideysid saliid la'aan kuleyl ama heerkul hoose intaadan riixin, iyo hoosta deegaanka ka hooseeya 60 ℃, saliida waxaa lagu tuujiyaa heerkul hoose iyo qiimaha aashitada. Guud ahaan, uma baahna in la sifeeyo. Roob iyo sifeyn ka dib, saliida wax soo saarka ayaa la helaa. Midabka saliidu wuu fiican yahay, laakiin dhadhanka saliidu ma ahan mid udgoon oo wax soo saar saliida ayaa hooseeya. Guud ahaan waxay ku habboon tahay cadaadiska saliidda tayada sare leh.
2. Cadaadiska kulul waa in la nadiifiyo oo la burburiyo saliidda ka dibna lagu diiriyo heerkul sarreeya, taas oo keenta is-beddelo isdaba-joog ah oo ka dhaca gudaha warshadda saliidda, sida burburinta unugga saliidda, dhiirrigelinta dheecaanka borotiinka, yareynta u nuglaanshaha saliidda, iwm. si ay ugu habboonato saliidda riixitaanka iyo kordhinta wax-soo-saarka saliidda. Tikniyoolajiyadda riixitaanka kulul waxaa guud ahaan loo isticmaalaa soosaarka ballaaran iyo ka shaqeynta saliidda la cuni karo, iyadoo leh ur udgoon, midab madow iyo soo saar saliid badan, laakiin way fududahay in la sababo luminta nafaqooyinka ku jira alaabta ceeriin.
Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Dhammaan Alaabooyinka Saliida Saliida, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Yar, Saliida Olive, Saliida Saliida, Mashiinka Madbacada, Mashiinka Saliida Qabow,